Uganda oo sheegtay inay weerar ku dishay 189 ka tirsan Al-Shabaab - Awdinle Online
Dowladda Uganda ayaa shaacisay in weerar ay ka fuliyeen degaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen dagaalamayaal farabadan oo ka tirsan Ururka Al-Shabaab, kuwaas oo inta badan weerara saldhigyada Ciidamada dowladda & kuwa AMISOM.
Afhayeenka Ciidamada UDPF Col Deo Akiiki ayaa sheegay in weerarka oo dhacay shalay ay ciidamadooda ka fuliyeen degaannada kala ah, Adimo, sigaale iyo Kayitoy oo ku dhow Janaale gobolka Sh/hoose, isla markaana ay weerarkaas ku dileen 189 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab.
Sidoo kale Afhayeenka waxaa uu sheegay inay weerarkaas ku burburiyeen hub farabadan oo ay lahaayeen Al-Shabaab, isla markaana ay la wareegeen gacan ku heynta degaanadaasi ay ku sugnaayeen Al-Shabaab.
Wararka qaar ee la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in weerarka ay qeyb ka ahaayeen diyaaradaha sida qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopters-ka, isla markaana ay duqeeyeen dhul howd ah oo ku yaal tuulooyin u dhow degaanka Janaale ee Gobolka Shabeellaha hoose.
Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin warkaan kasoo yeeray dowladda Uganda, waxaana sidoo kale jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada dowladda Uganda ee ku aadan inay dileen ku dhawaad 200 oo ah dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab.